Dhugaan Oromoo ifaa dha!Garuu namoota nagaa hedduutu dararamaa jira.” - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhugaan Oromoo ifaa dha!Garuu namoota nagaa hedduutu dararamaa jira.”
Dhugaan Oromoo ifaa dha!Garuu namoota nagaa hedduutu dararamaa jira.”
Keessummaa OMN: Gaaffiif deebii DR. Moggaa Firrisaa faana goone har’a galgala hordofuu hin dagatinaa! Dr. Moggaan namoota Waldaa Maccaaf Tuulamaa hundeessan keessaa tokko yoo ta’an qabsoo Oromoo Keessatti nama seenaa hedduu qabanidha.
Dhugaan Oromoo ifaa dha!
“Korri bittimsaa Buraayyuu machooftee walii isheetti boombii dhooste.
Maddi keenya akka ibsutti, miseensoti kunneen macha’anii waldhabdee isaan jidduutti ka’een, boombii walitti dhoosan.
Garuu namoota nagaa hedduutu dararamaa jira.”
Yoomuu hin dagatamu wonni attin jette JAWAAR erga argee isarratti dhugaa malee soba hin agarre
QABSAA’OTA OROMOOTII SILAA KABAJA GUDDATUU MALAAF
Waaqaaf malee , nama akka keetif hinguguufin. boodeti deebinee habashaa/qoshashaaf hin gugguufnu. Booredha!!!!